Akhriso: Shuruudaha Lagu Xiray Murashaxiinta Madaxtinnimada Galmudug. – Goobjoog News
Guddiga doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa goordhow shaaciyey shuruudaha laga rabo Murashixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
Qoraalka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha guddiga doorashada Xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil ayaa lagu xusay ilaa 9 qodob, kuwaas oo looga baahan yahay in ay soo buuxiyo Murashax waliba oo doonaya inuu ka qeyb galo doorashada Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
Doorashada xilka Madaxweynaha dowlad gobaleedka Galmudug ayaa lagu wadaa in la qabto 30 bishaan waxaana ku loolami doonaan dhowr murashax oo mid waliba doonayo inuu Galmudug hoggaamiyo 4-ta sano ee soo aadan.
Halkaan ka Akhriso Qodobada Shuruudaha: